Ny fampiharana 12 tsara indrindra hahitanao tobim-pilasiana | Androidsis
Manomboka mahazo mari-pana tsara kokoa izy ity ary ity Mampiseho amin'ny faniriana fa afaka miditra mivezivezy isika ary mahita rindranasa iray izay mampiseho amintsika ny toerana hahitana tobim-pilasiana izay handany andro vitsivitsy. Andian-tsarimihetsika izay anananay izay ahafahantsika mahafantatra ireo orinasa ireo izay mamela anay hiaina ny fialan-tsasatra amin'ny fomba hafa.
Bebe kokoa amin'ny DIY (Ataovy ny tenanao), na ataovy ny tenanao, ny tobin'ny tobin'ny tobin'ny mpitsangatsangana dia be mpitsidika ary maro kokoa ankehitriny no mianjera raha toa ka mila mijery bebe kokoa ny paosiny ny olona. Hanao izany isika miaraka amin'ireto andiana rindranasa izay ho mora kokoa ny mitady lasy, ary mankafy karazana traikefa ivelany aza.
2 Campings ACSI Campings Campings
3 Lisitry ny lisitry ny toby
5 CaraMaps - Faritra moto
6 Camping.Fampian'i POIbase
7 Faritra môtô sy fitsangantsanganana Meinwomo SOSeasy
9 Sarintany fiainana
10 Camper leveler
11 Haavo bubble
12 Campy - Camper sambatra
Ity iray ity Ny rindranasa dia mifamatotra amin'ny karatra ACSI ary tonga lafatra ny fanararaotana ireo tolotra tsara indrindra amin'ny vanim-potoana ambany (izay fahavaratra sy daty manan-danja hafa amin'ny taona). Ny zavatra tsara indrindra momba ity fampiharana ity dia ny fananantsika rafitra fanamarihana isa noho ny zava-misy fa ny ACSI mihitsy no miandraikitra ny fanamarinana ny kalitao sy ny fototr'ireo toerana fitobiana, ka ao amin'ny lahatahiry ao amin'ny fampiharana no ahitantsika toerana tonga lafatra mankany amin'ny tendrombohitra na iray akaikin'ny morontsiraka.
Fampiharana mifandraika amin'ny www.mundofile.es ary avy amin'izany no ahafahantsika manana ny fampahalalana rehetra eo am-pelatanana. Anisan'ny mampiavaka azy tsara indrindra ny maody ivelan'ny offline tahaka ny sari-tany. Izy io dia fampiharana izay manolotra endrika fandoavam-bola amin'ny € 12,99 mba hananana ny fampahalalana rehetra momba ny toby rehetra any Eropa, nefa koa manolotra fonosana misaraka ho an'ny firenena.
Developer: ACSI Publishing B.V.
Campings ACSI Campings Campings
Manaraka ny fisian'ny iray teo aloha dia manana an'ity isika fampiharana izay hahafahantsika mahafantatra ny tobim-pilasiana rehetra izay ekena ny karatra ACSI. Raha lazaina amin'ny teny hafa, raha te handray na hianatra momba ny tolotra ambany indrindra an'ny ACSI isika, ity fampiharana ity, toy ilay teo aloha, dia tena ilaina. Na dia manohitra anao aza izahay dia tsy maintsy milaza izahay fa tsy maimaim-poana, satria raha te hankafy ny zavatra niainanao izahay dia tsy maintsy mandoa € 3,59.
Tsy maintsy manana ny trosany izy maherin'ny 3.000 ny tobin'ny tobin'ny mpanaraka, fanavaozana maimaim-poana ary koa ny vala 9.000 ho an'ny motera, ka lasa fampiharana tsara ho an'ny torimaso any ivelany izany na amin'ny alàlan'ny tranolay fitobiana na moto. Ny maha samy hafa an'ity fampiharana ity sy ilay teo aloha dia ny tobin'ny ACSI ihany no hita eto, ka raha mitady hafa ianao dia aleo mankany amin'ilay teo aloha.
Lisitry ny lisitry ny toby
Mandeha mivantana amin'ny rindranasa iray izahay fa tsy hikaroka lasy, fa izany dia mety ho mora ampiasaina ho lisitra fizahana ny zava-drehetra izay tsy maintsy raisintsika rehefa mandeha mitoby na mankamin'ny toby izay nofidintsika teo aloha niaraka tamin'ireo fampiharana hafa isika.
Es marina fa amin'ny anglisy (inona no fotoana tsara kokoa anaovana fampiharana hianarana ity fiteny ity), fa ny vaovao omeny dia tena ilaina tokoa mba tsy hanadinoantsika na inona na inona. Ary tsy misy zavatra ratsy kokoa noho ny efa namela ny fitaovana rehetra teo amin'ny teti-bolantsika teo an-toby, ka niantso mafy tampoka isika nahatsiaro fa nanadino ny varingarina kely vita amin'ny solika na ny fitaratra tanana isika. Fampiharana maimaim-poana amin'ny teny anglisy.
Mety ho talohan'izay isika iray amin'ireo torolàlana feno indrindra amin'ny lisitra ho fampiharana premium izay mitentina 2,35 €. Hita amin'ny fiteny 5 izy io ary manana toby fitobiana mihoatra ny 7.800 ho an'ny firenena 30. Izy io dia manana ny fanohanan'i Ediciones JD, tonian-dahatsoratry ny Guiacamping ary encaravana.com, noho izany ny fampahalalana omeny dia sarobidy tokoa ho an'ireo izay mitady toby any an-toerana na any amin'ny fireneny.
Ankasitrahana izany ho amin'ny espaniola ary ny fampahalalana omeny momba ny tobin'ny toby dia amin'ny antsipiriany be dia be miaraka amin'ny dobo filomanosana, fandroana, trano fidiovana, barbecue, milina fanasan-damba, trano fisakafoanana, fisotroana, disko, sehatry ny fanatanjahantena ary angona informatika 70. Izany hoe, hitanao fa mazava momba ny serivisy natolotry ny toby tsirairay.
CaraMaps - Faritra moto
Una fampiharana mifantoka amin'ny motera, fa izany koa dia manome fampahalalana sarobidy momba ny tobim-pilasiana. Izy io dia fampiharana natokana ho an'ny toeram-ponenana an-kalamanjana amin'ny nuansa rehetra, noho izany dia lasa iray amin'ireo zava-dehibe indrindra amin'ity lisitra ity. Satria lamaody ny fananana na fanofana motera, dia nanjary be mpitia io tato anatin'ny taona vitsivitsy.
Ary eny, ny maotera dia lamaody ho an'ny zava-misy tsotra momba ny vidiny lafo loatra amin'ny fanofana fialan-tsasatra, Ka noho izany ny findainao, ny motera misy anao ary ny fampiharana tsara, dia hanana ny lalana rehetra amin'ny tongotrao ianao handehananao amin'izay tianao.
Anisan'ireo mampiavaka azy afaka miantehitra amin'ny faritra tsy misy fifandraisana isika, mikaroha tranokala misy GPS sy sivana mandroso handaminana ny fikarohana arakaraka ny filan'ny motera na ny toby. Misy maimaim-poana ho anao hanandrana ary hanomboka hitady.
Ity fampiharana ity dia miavaka amin'ny fananana trosa amin'ny fampahalalana data avy amin'ny CampingInfo, StellplatzInfo ary CaravanMarkt.info miaraka amin'ny teknolojia POIbase. Izany dia nilaza fa tsy maintsy manana rindranasa amin'ny teny Anglisy isika, saingy noho ny tsy fahampian'ireo rindranasa ireo dia raisinay an-tanan-droa noho ny angon-drakitra atolony sy ny zava-dehibe momba izany.
Misy karoka ivelan'ny Internet, karazana sivana isan-karazany, sari-tany haingana, fikajiana ny zotra, mpitari-dalana amin'ny lalana acoustique ary mamindra ny toerana itodiana any Navi-Apps sy ny maro hafa izay mamela anao mistery ho anao hahitanao ny tenanao.
Mazava ho azy, azonao atao ny miantehitra amin'ny tetik'asa fiarahamonina camp.info anao miaraka amin'ny fitsidihana 12 tapitrisa isan-taona, toerana fitobiana 24.900 44 any amin'ny firenena 5.800, kianja XNUMX XNUMX ho an'ny motera, mpivarotra / atrikasa 740 ary maro hafa. Maimaimpoana.
Faritra môtô sy fitsangantsanganana Meinwomo SOSeasy
Fampiharana iray izay mbola miditra aloha ary mampiavaka azy ny toerana fijanonany mihoatra ny 53.000 ho an'ny motera sy toeram-pilasiana, POI 2 tapitrisa (toerana mahaliana) ary atiny be dia be toy ny fampahalalana an-tsary, fanehoan-kevitra ary vondrom-piarahamonina izay manavao ny vaovao mahaliana antsika.
Ny iray amin'ireo zava-nisongadina dia ny sari-tany OpenStreetMap izay ahafahantsika mahita amin'ny fomba indray mipi-maso ny fampahalalana rehetra mifandraika amin'ny toeram-piantsonana, tobim-pilasiana, gara ary maro hafa. Fampiharana tena tiana, na dia mbola tsy azonay ihany aza ny tsy famoahana ilay kinova farany amin'ny Play Store hahafantarana ireo hevitra nomen'ny mpampiasa azy.
Ary handeha isika fampiharana izay lasa fitaovana ho an'ny fitsangatsanganana an-kalamanjana, satria sarintanin-kintana izay mampiseho antsika ny kintana amin'ny alàlan'ny fakantsary rehefa manondro azy ireo amin'ny finday isika, ary koa ireo antokon-kintana sy ireo fampahalalana rehetra ireo fa amin'ny alina dia mety ho tena tsara.
Rindrambaiko izy io maimaimpoana amin'ny fanandramana tsara amin'ny ankapobeny ary izany dia fitaovana ampitaina amin'ny finday. Fampiharana tsara ho fanampiny ho an'ireo fampiharana hahitanao lasy.
Developer: Terminal iraika ambin'ny folo
Fitaovana iray hafa hiaraka amin'ity andiana fampiharana ity ho an'ny mitadiava lasy ary izany dia sari-tany tonga lafatra hahafantarana ny fiainana dia izay manodidina antsika. Izany hoe, raha faritra misy biby mampinono, vorona, amphibianina ary maro hafa.
Kaonty ao amin'ny fotony angona misy karazany mihoatra ny 30.00 manerana an'izao tontolo izao ary hahafahantsika mamantatra na dia ny karazany aza eran'izao tontolo izao, dia biby mampinono, sahona, biby mandady, dragona, trondro na hazo. Fampiharana tonga lafatra hametrahana azy mba hahafantarany hoe iza avy ireo karazana manodidina antsika rehefa mandeha mamaky ny tontolo ambanivohitra isika. Maimaimpoana, na dia vitsy aza ny fisintomana.
Developer: Sarintany fiainana
Una fampiharana hampitoviana ny motera rehefa apetratsika amin'ny toerana tsy azontsika antoka hoe haavony izany. Tsy manana fisintomana betsaka toy ny hafa izy io, saingy manatanteraka tsara ny asany, dia ny fampitoviana ny motera.
Camper Leveler - Fanontana Maimaimpoana
Developer: fampiharana eland
Ary fampiharana iray hafa ilaina amin'ny motera ary ao anatiny ity eny dia manana hevitra sy mpampiasa an'arivony maro izahay. Tsotra, fa maimaim-poana ary tonga lafatra ho an'ity asa ity amin'ny fampitoviana tsara ny toerana ipetrahantsika.
Campy - Camper sambatra
Vitanay ity lisitry ny rindranasa ity hikarohana lasy miaraka amin'ity rindranasa maimaimpoana ity ary na dia tsy dia misy fanamarihana marobe aza dia iray amin'ireo vaovao indrindra ary miaraka amin'ny mahafinaritra famolavolana. Manana toerana 27.500 XNUMX ao anaty tahiry izy, miaraka amin'ny sivana fikarohana sy bebe kokoa hahitana faritra fitobiana, toeram-pilasiana ary toerana mahaliana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny fampiharana tsara indrindra hahitana tobim-pilasiana
Inona ny AirDrop sy ny safidy 5 hafa ho an'ny Android